राष्ट्रपति निर्वाचनको मतगणना सुरु, तेस्राे राष्ट्रपति पनि भण्डारी नै हुने निश्चित ! - Seto Khabar राष्ट्रपति निर्वाचनको मतगणना सुरु, तेस्राे राष्ट्रपति पनि भण्डारी नै हुने निश्चित ! - Seto Khabar
राष्ट्रपति निर्वाचनको मतगणना सुरु, तेस्राे राष्ट्रपति पनि भण्डारी नै हुने निश्चित !
काठमाडौं, फागुन २९। राष्ट्रपति निर्वाचनको मतगणना सुरु भएको छ। मंगलबार बिहान १० बजेदेखि सुरु भएको राष्ट्रपतिको मतदान प्रक्रिया अपराह्न ३ बजेसम्म चलेको थियो। संसद भवन बानेश्वरमा अहिले मतदागणना भइरहेको छ।
संघीय संसद् भवन, नयाँ बानेश्वर परिसरको पूर्वतर्फको खाली स्थानमा संघीय संसद् र प्रदेशसभा सदस्यका लागि बेग्लाबेग्लै मतदान केन्द्र कायम गरी मतदान गराइएको थियो। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र पूर्वसांसद कुमारीलक्ष्मी राई प्रतिष्पर्धामा छन्।